रुन्टीगढी विकास सम्मेलन हुँदै « Postpati – News For All
रुन्टीगढी विकास सम्मेलन हुँदै
माघ २०, रोल्पा । रोल्पाको रुन्टीगढी गाउँपालिकाले ‘रुन्टीगढी विकास सम्मेलन –२०७५’ आयोजना गर्ने भएको छ । आगामी फागुन १० र ११ गते रुन्टीगढी गाउँपालिकाको होलेरी बजारमा आयोजना हुने सम्मेलनमा संघीय सरकारका उर्जा, जलश्रोत तथा सिचाइ मन्त्री वर्षमान पुनको प्रमुख आतिथ्यता रहने आयोजकले जनाएको छ ।
त्यस्तै राष्ट्रियसभा सदस्य मीना बुढा, संघीय संसद तथा पूर्व सभामुख ओनसरी घर्ती, संघीय संसद तथा पूर्वमन्त्री जयपुरी घर्ती, प्रदेश नं. ५ का आन्तरीक मामीला मन्त्री कुलप्रसाद केसी, प्रदेश सांसद दीपेन्द्र कुमार पुन, प्रदेश सांसद अम्मरबहादुर डागी, प्रदेश योजना आयोगका अध्यक्ष डा. प्रकाश श्रेष्ठ, रोल्पा, रुकुम पूर्व, सल्यान, प्यूठान र दाङका जिल्ला समन्वय प्रमुखका साथै स्थानीय तहका प्रमुखहरुलाई निम्त्याइने आयोजकले जनाएको छ । विकास सम्मेलनमा उपमहानगरपालिका र नगरपालिका, गाउँपालिका, उद्योग वाणिज्य संघ, गैरसरकारी संस्था महासंघ, पत्रकार महासंघ लगायत सरोकारवाला निकायको सहभागिता रहनेछ ।
होलेरीमा बसेको सरोकारवाला निकायहरुको बैठकले गाउँपालिका अध्यक्ष बालाराम बुढाको अध्यक्षतामा १ सय १ सदस्यीय मूल समारोह समिति गठन गरेको छ । त्यस्तै अध्यक्ष बालाराम बुढाकै संयोजकत्वमा ४१ सदस्यीय व्यवस्थापन तथा निर्देशक समिति गठन गरेको दिपक डिसीले जानकारी दिनुभयो । वडाअध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यहरुको संयोजकत्व रहनेगरी विभिन्न ९ विभागिय उपसमितिहरु समेत गठन गरिएको छ । सम्मेलनलाई भव्य बनाउन तयारीलाई व्यापक बनाइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।